Wararka Maanta: Talaado, Feb 11, 2020-Ilyaas Aadan oo ka hadlay sababta aan loo toogan mid kamid ah ragga gabadhiisa loo xukamay
Ilyaas Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dib loo dhigay fulinta xukunka xukumanaha saddexaad oo lagu magacaabo Cadbisalaan Cabdiraxmaan Warsame, kadib markii ay isku afgrteen isaga iyo qoyskiisa, si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.
Wuxuu sheegay Ilyaas in xukunka la fuliyay uu dawo u noqondoono gabar kasta oo Soomaliyeed inaan lagula kicin falka gabadhiisa loo geystay.
Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ah xukumanaha dib loo dhigay fulinta xukunkiisa waxay wararku sheegayaan in aan caddeymo rasmi ah loo helin in uu ka qeyb qaatay fal dambiyeedkaas.
Dhamaan maxkamadihii uu kasoo muuqday marnaba ma uusan qiran inuu kiiskaas ku lug lahaa, halka labada kale ay qiranayeen inay gabadha kufsadeen, laakiin ay ku dafirayeen inay dileen Caa’isha.
Balse, hay'addaha garsoorka Puntland ayaa sheegay in DNA laga qaaday uu caddeynayo inuu kiisku qeyb ka ahaa.
Dhamaman degaanada Puntland ayaa laga hadal hayaa xukunkaan, waxaana lagu wadaa inay dhacaan dibadbaxyo lagusoo dhoweynayo cadaalad Caa’isha.